लमजुङ भूकम्पले कहाँ कति घर भत्किए ? : RajdhaniDaily.com
Homeप्रदेशप्रदेश ४लमजुङ भूकम्पले कहाँ कति घर भत्किए ?
लमजुङ भूकम्पले कहाँ कति घर भत्किए ?
लमजुङ । बुधबार बिहान लमजुङ केन्द्रबिन्दु पारेर गएको भूकम्पका कारण ७३ घरमा क्षति पुगेको छ । घाइते ६ मध्ये एकको अवस्था गम्भीर छ । भूकम्पले घर भत्केपछि दोर्दी गाउँपालिका–८ द्वार गाउँकी दुईदिने सुत्केरी २३ वर्षीया दिलमाया मगर टनेलमा बस्न बाध्य बनेकी छन् । उनी दुई दिनअघि मात्रै सुत्केरी भएर अस्पतालबाट घरमा आएकी थिइन् ।
बार्दलीमा सुतिरहेका सोही गाउँपालिका–६ ठूलीबेसी गाउँका २२ वर्षीय गोविन्द अधिकारी बार्दलीबाट हाम्फाल्दा टाउकोमा चोट लागी बेहोस भएका थिए । जिल्ला अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि उनलाई भरतपुर ‘रेफर’ गरिएको जिल्ला अस्पताल प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, बेंसीसहर नगरपालिका–६ चनौटे गाउँका महेन्द्र गुरुङको घरमा डेरा गरी बसेकी मस्र्याङदी गाउँपालिका–६ घेर्मुकी ४० वर्षीया उमा गुरुङ गाह्रो भत्किएर पुरिँदा घाइते भएकी छन् ।
बेंसीसहर नगरपालिका–११ रामचोक बेंसीकी ८३ वर्षीया खुवकुमारी पाण्डेको घर भत्किँदा खुट्टाहातमा चोट लागेको छ ।
बेंसीसहर नगरपालिका–८ ओख्लेफाँट खुसीमाया गुरुङ, दोर्दी गाउँपालिका–७ लप्सीबोटका ८३ वर्षीया मंगलीमाया तामाङ, बेंसीसहर नगरपालिका–८ सेरा बस्ने ६० वर्षीया सुमित्रादेवी श्रेष्ठ घाइते भएका छन् । उनीहरू उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्
कहाँ कति घर भत्किए ?
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ७३ घरमा क्षति पुगेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मिश्रका अनुसार पुराना र ढुंंगा माटोले बनेका घरमा बढी क्षति भएको छ । ‘सबैभन्दा बढी बेंसीसहर नगरपालिकामा ४० वटा घरमा क्षति भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी निवाससमेत चर्किएर बस्न जोखिम भएको छ ।’
कपुरगाउँका तीन घरमा क्षति पुगेपछि गाउँलेलाई अन्यत्र बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार सो गाउँका गञ्जु गुरुङ, गञ्जु गुरुङ र मग्दिमाया गुरुङका परिवार स्थानीय आमा समूहले निर्माण गरेको भवनमा बसेका छन् । सो पालिकामा अन्य चार घर भत्किएका छन् ।
भूकम्पको केन्द्र रहेको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–८ भुलभुलेका नरबहादु गुरुङ र वडा ३ तरापु गाउँका बासुदेव खत्रीको घर भत्किएको छ । मध्यनेपाल नगरपलिका–७ लक्ष्मीबजारका विलास पोखरेल, चैनपुर टोलका इन्द्रचन ठकुरी घर र पराजुलीबेसीका नवराज तिवारीको धन्सार भत्किएको छ ।
त्यस्तै, सुन्दरबजार नगरपालिका–३ दुराडाँडा च्यानपाटाका गोरे क्षत्रीको ढुंगामाटोले बनाई जस्तापाताले छाएको एकतले घर पनि भत्किएको छ । सोही नगरपालिका–१० का दिननाथ तिवारीको घर चर्किएको छ । दोर्दी गाउँपालिकामा ११ घरमा क्षति पुगेको छ । तीमध्ये वडा ७ लप्सीबोट गाउँका केहरसिंह कामी र बुद्धिमाया तामाङको घर पूर्ण क्षति भएको छ ।
यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको जुनियर प्रहरी र प्रहरी निरीक्षकको भान्साघर चर्किएको छ । भान्साको काम गर्न जाखिम भएको कार्यालय सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीले जानकारी दिए । बुधबार बिहान ५.४२ बजेको भूकम्प केन्द्र लमजुङ उत्तरी क्षेत्रमा रहेको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–८ भुलभुले रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्प ५.८ रेक्टर मापन गरिएको छ ।
भोक हड्ताल र सरकारी सम्झौता